R/wasaare sharma’are iyo madaxda maamul Goboleedyada oo gaarey Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda Dowlada Federaalka Soomaaliya oo uu ka mid ah yahay madaxweynaha maamulka K/galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Qeybta Galmudug.
Wafdiga Dowlada Soomaaliya ee gaaray magaalada Gaalkacyo waxaa ka mid ah Wasiirka Madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad,Wasiirka Cadaalada C/llaahi Axmed Jaamac (Ilka-jiir),madaxweynaha Maamulka K/Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo Xildhibaano ka tirsan Dowlada Dhexe.
Wafdigan ayaa Gaalkacyo qeybta Galmudug u gaaray sidii ay qeyb kaga noqon lahaayeen xal u raadinta Xiisada ka taagan magaaladaasi oo u dhaxeeya maamulada Galmudug iyo Puntland oo shalay mar kale dagaal uu dhexmaray.
Horay magaalada Gaalkacyo waxaa u joogay Wafdi ka socday Dowlada oo xalay ku hoyday Gaalkacyo,waxaana Wafdigaasi horkacaya Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya C/raxmaan Odawaa oo waan waan ka wada magaaladaasi.
Dhanka kale,Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid iyo Wafdi uu Hogaaminayo ayaa isla maanta gaaray Gaalkacyo,waxaana ujeedka Wafuudaan uu yahay sidii xal loogu raadin lahaa dagaalka soo noq noqday ee magaaladaasi ku dhexmaraya Ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Socdaalka Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya uu maanta ku gaaray Gaalkacyo ayaa imaanaya Xilli madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed nasiib daro uu ku tilmaamay in Ra’iisal wasaaraha oo safaro ku kala tagay magaalooyinka Garowe iyo Galmudug uu tagi waayay magaalada Gaalkacyo oo ah halka dhibaatada ay ka jirto.
Tagged gaalkacyo mudug
Cabdiweli Gaas: ” Hal Taako cidna ugama tanaasuleyno”.